परराष्ट्रमन्त्रीको तेजोवध नगर !
सम्पादकीय परराष्ट्रमन्त्रीको तेजोवध नगर ! शंकाकै भरमा विदेश भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा परराष्ट्रमन्त्रीको मनोबल कमजोर बनाउन खोज्नुलाई सहज ठान्न मुस्किल हुन्छ
राजनीतिक अस्थिरताका बेला सरकार कमजोर हुन्छ । कमजोर सरकारले स्पष्ट अडान राख्न सक्तैन । यसैले यस्तो समयमा विदेशसँग सन्धि सम्झौता गर्दा राष्ट्र ठगिने जोखिम बढी हुन्छ । यसैले केही पूर्वप्रशासक लगायतका नागरिकले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले भारतसँग दीर्घकालीन महत्त्वका विषयमा सहमति वा सम्झौता नगरोस् भनी सावधान गराएको हुनुपर्छ । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली आज बिहीवार नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै नयाँ दिल्ली गएका छन् । उनको भ्रमण शनिवारसम्म हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र भारतीय विदेशमन्त्री सुब्रमण्यम जयशंकरले संयुक्त आयोगको सहअध्यक्ष्यता गर्नेछन् । यो उच्चस्तरीय आयोगको बैठकमा दुई देशको सरोकारका विभिन्न विषयमा छलफल हुने बताइएको छ ।
देशको राजनीति सहज अवस्थामा हुँदो हो त सायद नियमित प्रकृतिको भ्रमणका सम्बन्धमा धेरै चासो र टिप्पणी पनि हुने थिएन । विगतका भारतले नेपालमा सरकार कमजोर हुँदा वा देशभित्र आन्दोलन भएका बेला विशेष सन्धि सम्झौताको प्रस्ताव गर्ने नगरेका भए पनि सम्भवतः जनमानसमा सन्देह उत्पन्न हुने थिएन । यस्तै केही समययता प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग भारतीय संस्थापनको निकटता नदेखिएको भए पनि सायद धेरै सन्देह गरिने थिएन । तर, शंकाकै भरमा विदेश भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा आफ्नो मुलुकका परराष्ट्रमन्त्रीको तेजोवध हुनेगरी अविश्वास प्रकट गर्नुलाई भने सामान्य र सहज मान्न भने सकिँदैन । यसरी विदेश जान लागेका देशका उच्चखधिकारीको मनोबल गिराउन खोज्दा अन्ततः हानि राष्ट्रलाई नै हुने देखिन्छ । अरू मुलुकमा जति नै आन्तरिक मतभेद भए पनि विदेशसँगको सम्बन्धमा प्रबुद्ध नागरिकहरूले राज्यलाई साथ दिने गरेको देखिन्छ ।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली भारत भ्रमणमा जाने कार्यक्रम सार्वजनिक भएको केही दिन भयो । परराष्ट्रमन्त्रीलाई सल्लाह सुझाव दिनु थियो भने केही दिन पहिले नै दिएको भए बुद्धिमानी हुनेथियो । उनले वक्तव्य दिनेहरूसँग भेट्न पनि सक्थे होलान् । ज्ञवालीले सिंगो देशको प्रतिनिधित्व गर्दैछन् भन्ने सन्देश दिन सकेको भए भारतसँगको वार्तामा नेपालको पक्ष पक्कै बलियो हुन्थ्यो । तर, देशको प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा भएकै बेला त कमजोर देखाउने कूटनीतिक अशिष्टता प्रदर्शन गर्न नहिचकिचाउने नेता भएका देशमा सायद यसबाहेक अरू अपेक्षा पनि गर्न सकिँदैन । जेहोस्, काम चलाउ सरकारका परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भारतसँग नयाँ सन्धि वा सम्झौता पक्कै नगर्लान् र भारतसँग प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहको प्रतिवेदन बुझ्नेलगायत दुई पक्षीय हितका विषयहरूमा स्पष्ट धारणा राख्लान् भन्ने अपेक्षा छ । भारतबाट फर्केपछि उनले यहाँ शंका गर्नेहरूलाई गलत साबित गर्नेगरी भ्रमणको पूर्ण विवरण पारदर्शीरूपमा जनसमक्ष राख्नु उचित हुनेछ । स्यमन्तक मणि चोरीको बात लागेपछि कृष्णले मणि खोजेर ल्याई आफ्नो निर्दोषिता सिद्ध गरेको पौराणिक कथा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले पक्कै पढेका होलान् १